TGuff | Archive | LifeStyle
डार्लिङ च्याट र लाइब्रेरी
‘ओहो… डिस्टर्भ होला !’, रुम छिर्ना साथ मेरो अडियो कुराकानी सुनेर किरण भण्डारी र उजिर मगर झसङ्ग भए। गोरखा र पर्वतमा निर्माण हुन गइरहेका पुस्तकालयको लागि सहयोग जुटाउन म मिटिङ हलमा बसेर यूरोप-अमेरिकाका साथीहरुसँग स्काइप, फेसबुक र जीमेलबाट कुराकानी गर्दैछु। ‘भइहाल्छ नि म पनि सघाउँछु; साथीहरुलाई पनि भनुँला’, न्युयोर्कबाट विनोदले आश्वसन दियो। विहेको प्रसङ्गमा मैले […]
27. Jan, 20113Comments
‘हुन्छ हुन्छ सिधै कलंकी आए हुन्छ’, सुन्धारा कार्यालयबाट निस्कदै गर्दा मैले नारायण श्रेष्ठसँग फेरि मिटिङ पोइन्ट फिक्स गरेँ – ‘श्यामा आयल स्टोरमा पर्खौं।’ मुम्बइबाट यसै साता फर्केको स्याटेलाइटसँग कलंकी पुग्दा भोला शर्मा पूर्वनिर्धारित स्थानमै भेटिए। हामीबीच औपचारिकताको पर्खाल नै के छ र ! तै पनि भनिहालौं- ‘नमस्ते ! नमस्ते !!’ हामी साझा सावल गर्ने नारायण […]
हलिउड चमक (फोटो फिचर)
जय नेपालमा ‘कोही मेरो’को प्रिमियर सो हुँदा निर्देशक आलोक नेम्वाङ र हिरोइन झरनाको व्यस्थता देखेथेँ। हिरोइन र मुख्य कलाकार सहित सम्पूर्ण टिमै लागेर प्रिमियर सो गराउने संस्कृति त हलिउडकै पो रहेछ। हेर्नोस् त २४ नोभेम्बरबाट रिलिज हुने Burlesque को प्रिमियर सो को चमकधमक। क्यालिफोर्निया गुल्जार पार्ने कार्यक्रमका सबै तस्विर चेरिस पिज्जेलियोको क्यामेराबाट।
23. Oct, 20106Comments
त्रिभुवन विमानस्थलमा खुबै भिडभाड छ। ट्रली गुडाएर विदेशबाट फर्किएका युवाको प्रशन्न अनुहारले दशैँ उल्लासको झल्को दिइहेछ। अनि कति चाहिँ हातमा बोर्डिङ पास लिएर नयाँ यात्राको प्रतीक्षा गरिरहेछन्। काठमाडौं फर्किए लगत्तै म फेरि अर्को यात्राका लागि विमानस्थलमा छु। गाउँका धुलोमैलोसँग जीवन साट्दै हुर्किएका अनुहार केही वर्षको विदेश बसाइले होला चिल्लो भएछन्!? मनैमन मैले अनुमान लाएँ। ‘हुन […]
उसले कम्मरभन्दा तल लगाएको ब्यागी जिन्सपाइन्ट घरि-घरि माथि तान्‍नुपर्छ। टिसर्ट हेर्दा फुटबलमा ऊ पक्का इटलीको फ्यान हो। फिक्का मरुन कलरको स्पोर्टस् ज्याकेटको पिठ्युँमा ‘इटालिया’ लेखिएको छ। अनि कपालको शैली नि ? त्यो त झन् भन्नै परेन। चार वर्षअघिको डेभिड बेक्यामजस्तो जुरेली कट्। ‘कहाँ पुरानो हुनु यो स्टाइल, भर्खरै जोन अब्राहमले गोल (फिल्म) मा प्रयोग गरेको […]